ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကိုသင်မည်သို့အတုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကို Spot နိုင်သလား?
အားဖြင့် ထိုအ Baritchi
ကိုသင်မည်သို့အတုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကို Spot နိုင်သလား?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 23 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
“သင်က profile ကိုသင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ site ကို join ဖို့မျှော်ဖန်ဆင်းအစစ်အမှန်နှင့်မတစ်ခုခုအဘို့ဖြစ်၏မည်သို့သိရပါဘူး? ကိုယ်ကပူးပေါင်းမယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လဲကျနော်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအီးမေးလ်တွေအများကြီးရလိမ့်မည်, ထို့နောက်အီးမေးလ်များပဲရပ်တန့်. ကတက်ဆိုတာဘာလဲ?”
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ scam တွေရှောင်ရှားရန်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားကိုနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ရှိကြောင်းအဓိကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အတူကပ်နှင့်ကြီးမားသောအဖွဲ့ဝင်အခြေစိုက်စခန်းရှိသည်ဖို့ဖြစ်တယ်. သူတို့ကဝန်ခံမည်မဟုတ်, ငါမူကားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမထင်ရှားတဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ '' အခုအခံအချို့ငါမြင်ပြီ’ ပင်အတု profiles များအားလုံးနှင့်အတူ website နှင့်ယခုအချိန်အထိဒီ '' အတုမှမိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များ message တစ်ခုပေးပို့ဖို့အဖြစ်သွား’ ထို site ပေါ်တွင်ပိုပြီးလှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်ဖို့၏မျှော်လင့်ချက်များအတွက်လူတစ်ဦး.
ပိုကြီး, ပိုပြီးလူသိများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဒီလိုလုပ်ဖို့စရာအကြောင်းမရှိရှိသည်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အဘယ်သူ၏အလုပ်က Spam တွေကိုနှင့်လိမ်လည်သူများကိုအသစ်အကောင့်များနှင့်ပေါင်းပင်ထွက်ကိုစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်န်ထမ်းများရှိသည်. ပိုကြီးဆိုဒ်များကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်သူ့ပုံရိပ်ရှိသည်, မူသောသင်တို့အမျက်နှာသာမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်. သင်တစ်ခုမှာ spammer တွေကသို့မဟုတ်လိမ်လည်သူများကိုဖြစ်ခြင်း၏တစ်စုံတစ်ဦးကသံသယရှိလျှင်, သင်ချက်ချင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကသူတို့ကိုသတင်းပို့ကြောင်းသေချာပါစေ.
တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင့်ရဲ့စာတွေကိုမထူးစေခြင်းနှင့်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသင်တို့နှင့်အတူအဘယ်သို့မျှမပြုပါရှိသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့အမှန်တကယ်အလုပ်များတယ်, အားလပ်ရက်ဘယ်ဘက်မြို့, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပဲသူတို့ရဲ့အမှုသည်မရှိလှကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာစိတ်ပျက်အားလျော့လာသည်မဟုတ်. စာရေးတို့သည်ပင်လယ်ထဲတွင်ပိုမိုငါးများရှိပါသည်.
ကျွန်မလုံးဝစွန့်လွှတ်မှအဆုံးအဖြတ်မပေးခင်သီတင်းပတ်အနည်းငယ်၏သင်တန်းကျော်အနည်းငယ်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်. ပြီးနောက်, သင်ဆဲဘာမှဤအရပ်၌မရှိဘူးဆိုရင်, ရှေ့ဆက်သွားသည်.
သင်စာတိုပို့စနစ်လူတစ်ဦးအကြောင်းတခုခုအတွက်သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကြိုးစားနေတစ်ဦးလိမ်လည်သူများကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေရာမျိုးရှိပါတယ်. သူများသည်အကောင့်အသစ်များ၏မကြာခဏအဓိကချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာတွေ့ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်. သင်တုံ့ပြန်သည့်အချိန်အားဖြင့်ဒါ, အကောင့်ကိုဖျက်ထားသည်ခဲ့ကြပေမည်.
သင်တို့သည်လည်းတကယ် site ၏တစ်ဦးကိုပေးဆောင်အဖွဲ့ဝင်မယ်သောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးထံမှတစ်ဦးမျက်တောင်ခတ်ရစေခြင်းငှါ,. သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသူ့ထံသို့ဆက်သွယ်လျှင်သူမpaysÖနှင့်သူမအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါမဟုတ်လျှင်သူမတုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. သူသည်သင့်ကိုပြောပြရန်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ့်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိမယ်. သင့်ရဲ့စာရင်းပေါ်မယ့်ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးမှပေါ်ရွှေ့ပါ.
Red အအလံများ. သင်ဘယ်လိုလိမ်လည်သူများကိုမှအစစ်အမှန်ကလူကိုသိနိုငျ?
“Red အအလံများ” ကိုယ်ရေးဖိုင်ညွှန်ပြသောသင်တို့၌ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ profile အတွက်ကိုရှာဖွေနိုင်သောသူတို့သည်လည်းထိုအမှုအရာအနည်းငယ်သာအတုဖြစ်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်. Profile တစ်ခုအစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အတုလျှင်သေချာသိရဖို့နည်းလမ်းမရှိတကယ်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပေမယ့်, သင့်အဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်သင့်ကြောင်းအချို့အနီရောင်အလံများရှိပါတယ်.
– လူတစ်ဦးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော website မှာသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ထွက်စစ်ဆေးရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်. ဒီနေဆဲဆိုတာကတက profile ကိုဖြစ်နိုင်, ဒါပေမယ့်လည်း porn site ကိုမှဖွင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြစ်နိုင်.
– သင်ရှိသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဘယ်တော့မှဆိုရင်, အလွန့်အလွန်ကိုရှေ့သို့နှင့် flirty သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်ပို့ပေး, သူမကပဲ porn မော်ဒယ်သို့မဟုတ် cam မိန်းကလေးသူမ၏ site ကိုသင့်အားဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားရမည်အကြောင်း, သို့မဟုတ်တစ်ဦးကိုပြည့်တန်ဆာ clients များရရန်ကြိုးစားနေ.
– တစ်ကယ့်ကြီးမြတ်ရှာဖွေနေကောင်လေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေး (ကျွန်တော်စူပါမော်ဒယ်ရဲ့အရည်အသွေးပြောနေတာင်) သင်ပင်ဓာတ်ပုံတပုံကို upload သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွတ်ကြပြီမဟုတ်ပင်မဲ့ message တစ်ခုပေးပို့.
– ကိုယ်ရေးဖိုင်ထဲတွင်သဒ္ဒါအလွန်ဆင်းရဲအရည်အသွေးသည်နှင့်နိုင်ငံခြားအသံ. စာရေးတစ်ဦး Spam တွေကိုရှိပါတယ်, မကြာခဏရုရှားနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားမှ (များနှင့်အခြားနေရာများ), ကအထူးသဖြင့်ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့တခြားလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပစ်မှတ်ထား, ထိုကဲ့သို့သော MySpace နှင့် Friendster အဖြစ်.
– လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထိုကဲ့သို့သောဖုန်းနံပါတ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များမေတ္တာရပ်ခံလျှင်, လိပ်စာ, သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ၏တခြားအမျိုးအစား, သူတို့ပဲခိုးယူသို့မဟုတ်အချို့သောအခြားလိမ်လည်လှည့်ကိုလိမ်လည်မှုအတွက်အသုံးပြုမည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ချိန်းတွေ့ site ကိုအသုံးပြုရလိမ့်မည်.
– မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဆိုပါက, လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျကို '' စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကောင်းသောအဖို့ 'ဟန်, ဒီဂရုဖြစ်သင်တိုက်တွန်းသင့်ပါသည်.
ငါသည်သင်တို့ကိုအဲဒီစံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသောမက်ဆေ့ခ်ျတုံ့ပြန်ဘယ်တော့မှမသင့်ကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, သင်မူကား, ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သတိနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်!
သင်ရုံဘုံသဘောကိုအသုံးပြုလျှင်သင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်. သတိရ, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မ, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသက်ဆိုင်နေဆဲ.